Sioka Dimy Voalohany: Mamazivazy Ny Sivana Amin’ny Aterineto Ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2015 15:32 GMT
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ilay mpikaroka ao amin'ny Small Media (Media Madinika) Kyle Bowen, ary navoaka voalohany tao amin'ny Medium
Niteraka resabe tao amin'ny media sosialy ny fikorontanana vao haingana tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram. Nanararaotra izany ireo mpiserasera Twitter ao amin'ny firenena mba haneho fitarainana ankapobeny bebe kokoa momba ny aterineto miadam-pandeha, lafo vidy sy voasivana loatra, fantatry ny Iraniana sasany amin'ny hoe ‘filternet’. Ireto fanehoan-kevitra dimy tsara indrindra tao anatin'ny volana lasa:
Manoa lalàna hatrany ny mpandala ny nentim-paharazana Iraniana idirana amin'ny tambajotra sosialy “voaràra”. Jereo ny tatitra ‘Unmasking the Arzeshi (Manala sarontava ny Arzechi)’ raha te-hahafantatra bebe kokoa
Natao hanivanana izay votoaty “tsy mendrika” ao amin'ny sehatra tahaka ny Instagram ny tetikasa “Fanivànana Maranitra” ao Iran. Saingy araka ny filazan'ity mpiserasera ity, mety hahatonga ny ezaka fanivànana maranitra ao Iran ho lany andro sy tsy mahomby ny fanovana ara-teknika nataon'ny Instagram. Oops. Vola 66 dolara tapitrisa very fotsiny izany!